मनोरन्जन Archives - UflyRadio
नियमित यौनसम्पर्क गर्ने केटिलाई कसरी चिन्ने? शरीरमा देखिन्छन यस्ता लक्षण निमयित यौन सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको […]
कुमारीत्वसम्बन्धी एउटा अंग्रेजी उखान छ- तिमीलाई कुमारी केटीसँग बिहे गर्नुछ भने कोक्रोमा पाइएला। कुमारीत्वको भ्रम र आडम्बरका कुरा युगौंदेखि लिरहेका छन्। बिहेअघि शारीरिक सम्बन्ध नराखेकी अर्थात् अक्षत योनी भएकी महिलालाई कुमारी भन्ने गरिन्छ, सामान्यतया। तर, […]
‘सीप भएको भए सीप बेच्थेँ, पढाइ भएको भए पढाइ बेच्थेँ । केही थिएन । सम्पत्तिको नाममा यही शरीर थियो, यही बेचेँ ।’(भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
एक यौनकर्मीको आत्मकथा : ‘मेरा ग्राहक सांसद, पुलिस र आर्मी’ रातोपुलको एउटा क्याफेमा सेतो पेन्ट, कालो र नीलो छिर्केमिर्के टिसर्टमा आइपुगिन् उनी । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा यौनकर्मीको संख्या ५४ हजार नाघिसक्यो । त्यही ५४ हजारको […]
महिलाहरु पहिलोपटक यौन सम्पर्क गर्दा किन डराउँछन, यस्तो छ कारण ?जानी राखौ )पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
मलाई यौनसम्पर्क गर्न अति इच्छा हुन्छ तर मैले कसैसँग पनि यौनसम्पर्क गरेकी छैन किनभने ममा चाहना भए पनि अर्को पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्ने सोच मात्र राख्दा पनि एकदम डर लागेर आउने, मुटु कमजोर हुने, आत्मविश्वास हराउने […]
यौन सम्पर्कका लागि पार्टनरलाई कसरी फकाउने ? यस्तो छ नयाँ अध्ययन जानी राखौ (भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
अध्ययनहरुबाट यौनका बारेमा नयाँ-नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ र लागी रहेको पनि छन् । केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ । सम्भोग सुरु गर्नुअघि […]
काठमाडौं / अभिनेत्री वा मोडलहरु त सुन्दर हुन्छन् नै । यी बाहेक अन्य पेशामा सक्रिय युवतीहरु धेरै सुन्दर भए उनीहरुको निकै चर्चा चल्ने गर्छ । यस्तै एक युवती छिन् जो हिरोइन वा मोडल होइनन् तर […]
यस्तो रहेछ महिलाहरूकाे नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ : (भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
महिलाहरुमा नितम्ब ठूलो हुनुलाई कामुकतासँग जोडिन्छ । तर नितम्बको सम्बन्ध केवल कामुकतासँग मात्र छैन । वजन ठिक्क भएका तर जिउको अन्य भागको अनुपातमा नितम्बको आकार ठूलो भएका मानिसहरु समग्र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि भाग्यमानी र सुरक्षित […]
सुहागरात को सुरुवात र सुहागरातको समाप्ति (यौन कथा)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
महिलाको स्तन सम्वन्धि ९ रोचक तथ्यहरु : जानी राखौ(भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
महिलाहरुप्रति पुरुषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थल अर्थात् स्तनबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनमा प्राय पुरूषहरुको पहिलो नजर नै महिलाको स्तनमा पर्ने गर्दछ । त्यसैले पनि वक्षस्थल महिलाको […]